Mogadishu Journal » Wararkii ugu dambeeyay Ciidamo qaraxyo lagula eegtay duleedka Kismaayo
Kismaayo : HN :-Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya duleedka Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubbada Hoose, ciidamada Kenya ayaa waxaa lala eegtay qaraxyo dhaliyay khasaare kala duwan.
Ciidamada Kenya iyo kuwa Jubbaland ayaa ku socdaalayay duleedka degaanka Yoontoy, waxayna ciidanka ahaayeen kuwa lugeynayay, xilliga qaraxa Koowaad lala eeganayay.
Qaraxa Koowaad markii uu dhacay ayaa la sheegay inay ku waxyeeloobeen ciidan Soomaali ah, balse ciidamada Kenyan-ka wax khasaare ah uusan soo gaarin.
Wararka ayaa sheegaya in sidoo kale uu jiray qarax kale oo khasaare gaystay, kaasi oo lala eegtay ciidamo Kenyatti ah oo saarnaa gaariga, waxaana bur bur xooggan uu soo gaaray gaarigii ay wateen ciidamada Kenyan-ka.
Qaraxyadan oo ahaa kuwa miinooyinka dhulka lagu aaso, ayaa Al Shabaab waxa ay galiyeen wadooyinka ka baxa deegaanka Yoontoy, halkaasi oo muddooyinkii dambe ciidamada Kenya iyo kuwa Jubbaland ay ka wadeen dhaqdhaqaaq Militari oo ka dhan ah Ururka Al-Shabaab.
Xoogaga Shabaab ayaa ku sugan meelo aanan sidaasi kaga fogeyn deegaanka Yoontoy ee Gobolka Jubbada Hoose.
Ciidamada Jubbaland iyo kuwa AMISOM ee Jubbooyinka ku sugan ayaa kordhiyay hawlgalada ay ku beegsanayaan degaanada Shabaab ay ku sugan yihiin.